Google က App Store ကို vs Store ကို Play (Apps ကပ၏နံပါတ်)
Google play စတိုးဟာ android မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်, iPhone ကိုမိုဘိုင်းအတွက်ခွင့်ပြုမထားဘူး, ကြောင်းနှင့် App ကိုစတိုးဆိုင်ကိုလည်းအတူတူပင်ကိစ္စများ. ဒါပေမယ့် Google Play စတိုးကပိုဖွယ်ရှိဟုပြောယူရမယ့်, ဘီလီယံခန့်လူမျိုးသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်ထို app ကိုအသုံးပြုဖို့, Google ကတိုင်းမိုဘိုင်းအပေါ်ကောင်းသောရှာဖွေနေ Store ကို Google play စတိုး Play, ဒါပေမယ့်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရာဖြစ်တယ်? ဝမ်းမြောက်စွာကျွန်တော်တို့ကို wikiwon.com အတိုင်းလိုက်နာငါ၏အက်ဘ်ဆိုက်၌သင်တို့အဘို့အရေးရန်. ကံမကောင်းသဖြင့်, Google Play က iPhone iPhone ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာငါတို့ app ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်ခွင့်ပြုမထားဘူး, ဒါကြောင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. performance ဆက်ဖတ်ရန် [...]
iOS ကို vs အန်းဒရွိုက် – ခြားနားချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ် (အန်းဒရွိုက် Nougat နှင့် iOS အတွက် update လုပ် 10)
တဦးတည်းသင်တို့အဘို့ သာ. ကောင်း၏ထားတဲ့အန်းဒရွိုက် VS ကို iOS? ငါက Android ကိုယူသင့်ပါတယ်လျှင်သင်စဉ်းစားနေကြတယ်, ငါအရပ်ရပ်မှာ IOS ကိုလက်လွတ်နိုင်, ဒါကြောင့်ဘာတစ်ခုမှ IOS ကိုပြီးရင်လွယ်ကူသောဖလှယ်ကြိုးစားမီက Android ကိုယူကြဘူး, ဒါကြောင့်သင်တို့အပေါ်မှာမူတည်, ပုံမှန်အားဖြင့်, ထိုကွောငျ့, လူမျိုးကဒီခြားနားချက်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များမရ. သငျသညျ IOS ကိုယူကဘာလဲဆိုတာအဘယ်ကြောင့် iOS ကို vs Android? သင်၏အသက်တာအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ဟာ android မဟုတ်ပါဘူး? မညျသူမြှ, iOS က iPhone ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းအတွက်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်နဲ့ Android မိုဘိုင်းဖွယ်ရှိ Motorola ကမိုဘိုင်းအတွက်သုံးစွဲဖို့မကြိုးစားပါဘူး, သူတို့အက iPhone ကုမ္ပဏီမပါဘဲများမှာဘာမှ ဆက်ဖတ်ရန် [...]
ခက်အလုပ်လုပ်ကြောင့်သင်တို့အပေါ်မှာမူတည်အလုပ်အနိမ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှကြိုးစားရန်မဖြစ်နိုင်. တကယ်တော့, အိုင်ကျူရွေးချယ်စရာထိပ်လူကြိုက်အများဆုံးများစွာသောလူကို အသုံးပြု. အပေါ်အကျိုးကျေးဇူးတာဖြစ်ပါတယ်နေကြတယ်. ငါသည်ဤသတင်းနှင့် ပတ်သက်. သင်တို့ရှိသမျှကိုမျှဝေဘာလဲဆိုတာ, ငါသည်သင်တို့ကိုဤကိုလည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးရလုပျနိုငျမျှော်လင့်ပါတယ်, သန်းပိုဝင်ငွေကိုဘယ်လို $ 18,000 အိုင်ကျူ Option ကိုအတူတစ်ဦးကအပတ် $ 18,000 တစ်ပါတ်လုပ်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ဈေးကွက်သငျ့စိတျနှုန်းအဖြစ်ကောင်းစွာသွားလျှင်ထို့နောက်သင်အလွယ်တကူရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးကိုရကြလိမ့်မည်စျေးကွက်အပေါ်မူတည်, မှန်လိုက်လေဗျာ, no ဆက်ဖတ်ရန် [...]
အိုင်ကျူ Options ကိုထရေးဒင်းလူကြိုက်အများဆုံးထိပ်တန်းဖြစ်ပါတယ်မူတည်သင့်ရဲ့ကံပေါ်မှာပိုက်ဆံအွန်လိုင်းလမ်းဝင်ငွေ, Would You Like To Start Trading on IQ Options Today, သေချာလား? Begin ကြစို့. Trading on IQ Option Online Earning Way... ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့, သငျသညျအိုင်ကျူ Options ကို website မှာအသစ်တခုအကောင့်ယူသင့်တယ်, ကမှတ်ပုံတင်မည်. In this website provide you practice account with 1k$ giving you on practice account don't worry to shocked with that, it is policy on IQ Options willing everything does, Is IQ Options Give you the money on first ဆက်ဖတ်ရန် [...]